Notepad ကို Save တဲ့အခါ မြန်မာလို မပေါ်ဘူးဆိုရင် ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Windows နှင့်ပါတ်သတ်သမျှ » Notepad ကို Save တဲ့အခါ မြန်မာလို မပေါ်ဘူးဆိုရင်
By နေမင်းမောင်11:38 PM34 comments
ဒီပို့စ်လေးကိုတော့ မသိသေးတဲ့ သူများအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါတယ် .. လုပ်တက်သွားရင်တော့ လွယ်တယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် မသိသေးရင်တော့ တော်တော် ရွာပတ်ပါတယ် .. ဘာပဲပြောပြော ဒီကောင်လေးကို လိုအပ်ပါတယ် .. ကျွန်တော်တို့ မှတ်ထားချင်တာလေး တွေကို အလွယ်ရေးပြီး မှတ်ချင်တဲ့ အခါမှာ Windows Logo + R ကိုနှိပ်ပြီး Run Box ကိုဖွင့် ပြီးရင် Run Box ထဲမှာ notepad လို့ရိုက်ထည့်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ Notepad ထဲမှာ အလွယ်တကူ မှတ်သား တက်ကြပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ Notepad မှာ Zawgyi-One Font ကိုမပြောင်း ပေးဘူးဆိုရင်လည်း မြန်မာလို ပေါ်မှာမဟုတ်သလို Save တဲ့အခါမှာလည်း Unicode ကိုပြောင်းပြီး မ Save ဘူးဆိုရင်လည်း Save တဲ့အခါမှာ မြန်မာလို ပေါ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး .. ဒါကြောင့် Notepad ကိုအသုံးပြု တဲ့အခါမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေသူတွေ အတွက် ကျွန်တော် ရေးပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
အရင်ဆုံး Keyboard မှ Windows logo + R ကိုနှိပ်ပြီး Run Box ကိုဖွင့်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် Run Box ထဲမှာ Notepad လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ .. ဒါဆို Notepad လေးပွင့်လာ ပါလိမ့်မယ် .. အရင်ဆုံး ကျွန်တော် မြန်မာလို ရိုက်လို့ရအောင် ဖောင့်ဘယ်လို ချိန်းရမယ် ဆိုတာကို ပြပေးသွားပါမယ် ..
အပေါ်က အတိုင်း ပြောင်းပြီး သွားပြီ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Notepad လေးကို Save လိုက်ပါ .. အောက်က ပုံလေးအတိုင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ..
အောက်က ပုံအတိုင်း Unicode ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါ ..
Unicode ကိုပြောင်းပြီး သွားပြီ ဆိုရင်တော့ Save လိုက်ယုံပါပဲ ..
ပြီးရင်တော့ မိမိတို့ Save လိုက်တဲ့ Notepad လေးကို ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ .. မြန်မာဖောင့် ပေါ်နေတာကို တွေ့ ရပါလိမ့်မယ် ..
Junemoe November 6, 2011 at 11:44 PM
Anonymous November 7, 2011 at 1:04 AM
ကျေးဇူးဗျာ...သိလိုက်တော့လည်း သြော်..လွယ်လိုက်တာဗျာလို့ ဆိုရတော့မယ်..မသိခင်ကဆို
တကယ်ကိုရွာပတ်၇တယ်.. ဘယ်နှစ်ပတ်မှန်းမသိအောင်ကို ပတ်တယ်..ဒီနေ့တော့ ပညာတစ်ခုတိုးသွားပါပြီ.. ကျေးဇူးကိုနေမင်းမောင်
ချစ်လွန်းငယ် November 7, 2011 at 9:27 AM
အို..အရမ်း အရမ်း ကျေးဇူးတင်မိတယ်။
မသိခင်တုန်းကဆို Eng လိုပဲမရ မက save
နေရတာ။ မခုမှပဲ အိုကေမှာ ဆိုပြေတော့တယ်။
ကေမင်း November 7, 2011 at 9:37 PM
နတ်မင်း November 11, 2011 at 10:37 AM
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် အရင်ကဆို အဲဒီလိုမလုပ်တတ်လို့ word နဲ့ save နေရတယ်
အောက်တိုဘာ November 30, 2011 at 8:31 PM
zinko December 5, 2011 at 7:10 AM
lional March 13, 2012 at 1:49 PM
Anonymous May 5, 2012 at 9:11 AM
ကျေူးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ် အကို။
bobolatt May 6, 2012 at 6:44 AM
July WaiMyo May 6, 2012 at 11:59 AM
mg May 7, 2012 at 3:37 PM
mg May 7, 2012 at 3:38 PM
Anonymous May 8, 2012 at 12:56 AM
thanks Ko Nay Min Maung
ကျေးဇုးပါ အကိုရာ ဘာတွေမှန်မသိဘုး ဖတ်မရလို.နေနေတာ
moewaizin9 May 9, 2012 at 12:22 AM
sittag May 10, 2012 at 2:58 PM
အခုလို နည်းပညာတွေ မျှဝေပေးတဲ့ ကိုနေမင်းမောင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...
ကျွန်တော်တစ်ခုတောင်းဆိုချင်လို့ပါ .. ကျွန်တော် MS SQL Server 2005 မှာပါတဲ့ (View,Trigger...etc)ရေးနည်းနဲ့ဘယ်လိုအသုံးပြုရကြောင်းမြန်မာလိုရေးပေးစေချင်ပါတယ် ..
Anonymous May 11, 2012 at 10:10 AM
ဟုတ်တယ်ဗျို့ ကျနော်လဲ ဒီအပိုင်းလေးသိချင်နေတာကြာပေါ့ ပြောင်းတဲ့ထိသိတယ် unicode ပြောင်းပြီး save ဖို့ကိုမသိတာ အခုမှပဲရှင်းသွားတော့တယ် ကျေးဇူးကမ္ဘာပါပဲ...
cloker May 15, 2012 at 9:55 PM
Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank
i think i like you blog
Anonymous August 19, 2012 at 3:10 PM
aungsan zarni September 14, 2012 at 1:05 AM
thandar September 14, 2012 at 12:36 PM
10Q amyargyi tin tal byar
motherson October 22, 2013 at 10:41 PM
တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကို။ ကျမ်းမာပါစေ။
HTA2010 October 24, 2013 at 8:37 PM
ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ညီ နေမင်းမောင်
kyaw thu hlaing November 13, 2013 at 10:41 AM
မသိခဲ့လို. eng လိုဘဲSave ခဲ့တာ
mg htay December 16, 2013 at 5:15 PM